Tiraampiin Buqqisuu: Senaateroonni yaa'ii Tiraampiin buqqisuuf gaggeefamurratti taphataafi mugaa turan - BBC News Afaan Oromoo
Tiraampiin Buqqisuu: Senaateroonni yaa'ii Tiraampiin buqqisuuf gaggeefamurratti taphataafi mugaa turan
24 Amajjii 2020
Senaataroonni Ameerikaa wayita Pirezidaant Doonaald Tiraampiin aangoorraa buqqisuuf yaa'ii gaggeeffamaa jirutti hirriba rafuu, taphachuufi seerawwan biroo cabsuudhaan himataman.
Senaateroonni Jiim Riishiifi Jiim Inhoof jedhaman lamaan yeroo yaa'iin pirezidaanticha buqqisuu gaggeeffamaa turetti mudaa turan.
Haasawaan yaa'ii buqqisuurratti taasifamaa tures dheeraa waan tureef Senaateroonni kunneen hirribni fudhatee mataa buusaa turan.
Senaateronni kunneen taphawwan gara garaas osoo taphataa jiranii harkatti qabamee jira.
Himannaan Mr. Tiraampiin buqqisuuf taasifamaa jiru 'aangoo isaatti akka hin taanetti fayyadamuun dimokiraasii Ameerikaa yaaddoo keessa galcheera' kan jedhudha.
Senaateroonni yaa'icharratti hirmaataa jiran kunneenis yakka ittiin Pirezedaantichi himatame kana dhaggeeffachuun aangoorraa buqqisuufi dhiisuu murteessuu jedhama.
Bakka bu'oonni ummataafi senaateroonni, walumatti Kongiransiin Ameerikaa, biyyattii keessatti akka qaama guddaafi sodaatamaa ta'etti kabaja guddaa qaba.
Haata'u malee, miseensonni Kongireesii Ameerikaa kunneen - Rippaabilikaanota keessaas ta'e Dimkiraatota keessaa - torba kana keessa akka ijoollee mana barumsaatti amaloota nuffii agarsiisaa akka jiran miidiyaaleen biyyattii hedduu qeeqaa jira.
Tiraamp Ertiraa dabalatee lammiileen biyyoota Afrikaa afur Ameerikaa akka hin galle dhorkuuf
Abukaatonni Tiraamp himannaan pirezidaanticharraa akka ka'u gaafatan
Seerri akka ajajutti senaateroonni yeroo yaa'iin buqqisuu gaggeeffamutti akka teessuma isaanii qabatanii seeraan taa'anii dhaggeeffatan gaafata ture.
Kun ta'ee osoo jiruu Dimokiraatonni sagaliifi Rippabilikaanonni 22 ta'an Kamisa darbe yeroo gara garaatti teessuma isaanii gadhiisanii bahaniiru, akka Roohitars gabaasetti.
Kan warra Dimokiraatotaa bakka bu'uun pirezidaantummaa Ameerikaaf dorgomaa jiran akka Barnii Saandars, Amii Kilobuchaariifi Mikaa'el Benneet warra yeroo yaa'iin buqqisuu taasifamaa turetti teessuma isaanii gadhiisanii bahan kunneen keessatti argamu.
Kutaa bulchiinsa Teneesiirraa bakka bu'oo Rippabilikaanotaa kan taa'an Maarshaa Bilaakbarn ammoo yeroo yaa'iin kun gaggeeffamaa jirutti kitaaba dubbisaa turte himannaa jedhu irratti dhiyaate mormiteetti.
Gaggeessitoota koree dhaabbii dabalate miseensonni Senaaterootaa gara garaa yaa'ii Tiraampiin aangoorraa buqqisuuf taasifamaa jiru kanarratti gariin muguu, kaan ammoo tapha taphachuufi hojii biroo hojjechaa osoo jiranii argamaniiru.
Miidiyaaleen biyyattiis senaataroota kunneen gaafachuun gabaasaa jiru.
Muguufi taphachuu qofaa osoo hin ta'iin yeroo yaa'iin buqqisuu gaggeeffamaa jirutti [koriidara] yeroo deemaa jiranillee odeessuun dhorkaa ture.
Haata'u malee, senaateroonni Rippabilikaanotaa laama seera kanas cabsanii argamaniiru.
Nyaata ilaalchisees yaa'iin buqqisuu wayita gaggeeffamutti seera cimaatu jira ture garuu senaateroonni osoo chokolaataa nyaataniifi mastiikaa alanfatanii argamaniiru.
Wayita yaa'iin buqqisuu gageeffamutti miidiyaafi kaameraan akka seenu hin hayyamamu. Kana waan ta'eefis, wanta senaateroonni dhoksaatti hojjetan tokko tokkoon arguun rakkisaa ta'a.
Himata Tiraamp aangoorraa buusuu danda'uurratti sagaleen kennaamaa jira
Pirezidaantota Amerikaa aangoorraa buqqisuuf himanni irratti baname keessaa Mr Tiraamp isa sadaffaadha. Haata'u malee, Tiraampiin carraan aangoorraa buqqisuu waan hin fakkaannedha.
Sababiin isaas, manni maree Ameerikaa deggertoota Pirezedaantichaa kan ta'an miseensota Rippabilikaanotaatiin kan ol-aantummaan to'atamudha.
Donaald Tiraamp Ertiraa dabalatee lammiileen biyyoota Afrikaa afur Ameerikaa akka hin galle dhorkuuf
Ameerikaa: Himata Donaald Tiraamp aangoorraa buusuu danda'uurratti sagaleen kennaamaa jira
Tiraamp buqqisuu: Abukaatonni Tiraamp himannaan piresidaanticharraa akka ka'u gaafatan
21 Amajjii 2020
Qondaalli nageenyaa magaalaa Buraayyuu ajjeefaman, kaan madaa'an